Pensela, fitaovana ahafahana maka pikantsary sy fanamarihana | Ubunlog
Pensela, fitaovana ahafahana maka pikantsary sy fanamarihana
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery an'i Pensela isika. Ity dia fitaovana loharano misokatra ahafahantsika mamorona sy manao sary mivantana eo amin'ny efijery. Ny interface interface dia fitaovana iray fotsiny, izay mametraka ny fitaovana rehetra hanaovana fanamarihana, mampiasa endrika minimalista. Ny fitaovana rehetra misy anao dia azo idirana amin'ny tsindry tokana.
Ao amin'ny interface tsotra, Pensela dia manolotra endri-javatra izay manamora ny fanaovana sary sy ny fahafahana manampy endrika izay efa voafaritra mialoha ho stickers. Anisan'ireo endri-javatra mahaliana indrindra, afaka mahita fanasongadinana, fanohanana lahatsoratra, mpanangona loko mahazatra na fitaovana handraisana pikantsary.
Ity programa ity dia natomboka voalohany tamin'ny taona 2021, ary Ny mpamorona azy dia efa nandroso ny sasany amin'ireo endri-javatra antenainy hampiana amin'ny dingana fampandrosoana any aoriana. Ao anatin'ireo, manantena ny hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa izy ireo, manampy fanavaozana mandeha ho azy, ahitana fitsangatsanganana voatarika hanombohana, fitaovana fandraketana ecran feno, fanohanana tsara kokoa amin'ny lahatsoratra, ary koa tondro laser tsara kokoa. Ka raha marina izany dia afaka mihatsara be ny fandaharana.
1 Toetra ankapoben'ny Pensela
2 Mametraka Pensela amin'ny Ubuntu
Toetra ankapoben'ny Pensela
Izany dia programa maimaim-poana sy misokatra. Izy io dia zaraina amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana ISC.
Afaka mahita izany isika azo alaina amin'ny GNU / Linux, macOS ary Windows.
Rehefa manomboka ny fitaovana dia mijanona tsy mamaly ny varavarankelin'ny rafitra mavitrika satria mifantoka amin'ny fahaizan'ny fanamarihana an'i Pensela.. Na dia azo avadika aza izany amin'ny fampiasana ny bokotra fahitana (kisary amin'ny maso iray). Raha manafoana azy io isika dia ho afaka hifanerasera amin'ny windows active sy ny ekipantsika, saingy tsy hamela antsika hampiditra fanamarihana bebe kokoa izany mandra-pahetsika indray ny Pensela.
Hanome antsika ny mety mamorona endrika fototra toy ny mahitsizoro, faribolana, polygons, tsipika, ary telozoro.
Hanana ny safidintsika koa isika ampio stickers amin'ny kintana, lakroa, zana-tsipìka iray sy roa eo amin'ny efijery.
Hamela antsika afindrao ireo fanamarihana efa noforoninay.
Afaka manao izany isika ampidiro lahatsoratra raha tsindrio ny 'T'.
Ahitana mpanangona loko manokana. Ny fitaovana dia manome antsika fahalalahana hanamboatra ny lokon'ny zavatra tsirairay misy.
La manafoana / mamerina ny asa miasa seamlessly tsy misy fetra.
Hahita iray isika fitaovana an'ny Pikantsarin'ny.
Ankoatra ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo, koa manana highlighter sy laser pointer.
Ho hitantsika ny fahafahana manafina ny fanamarihana rehetra amin'ny tsindry iray, mba hampisehoana azy ireo indray amin'ny fotoana manaraka.
Santionany amin'ireo fisehon'ity programa ity ireo. Afaka maka hevitra amin'izy rehetra avy amin'ny tahiry GitHub an'ny tetikasa.
Mametraka Pensela amin'ny Ubuntu
Ho an'ny Ubuntu sy ny fizarana hafa mifototra amin'ny Debian, Pensela dia azo apetraka mora foana amin'ny alàlan'ny rakitra .deb omena ao amin'ny pejy famoahana ny tetikasa. Ho fanampin'izay, hanana ny programa azo alaina ho fonosana AppImage ihany koa izahay.
Araka ny nolazaiko, ity rindrambaiko ity dia azo apetraka amin'ny Ubuntu mampiasa ny fonosana .deb izay hitantsika ao amin'ny pejy famoahana tetikasa. Ity fonosana ity dia azo alaina amin'ny alàlan'ny navigateur web, na amin'ny fanokafana terminal (Ctrl + Alt + T) ary mihazakazaka wget amin'ny fomba manaraka hisintonana ny kinova farany navoaka androany:
Aorian'ny fisintomana dia afaka manomboka ny fametrahana programa fanatanterahana ity baiko hafa ity ihany:
sudo apt install ./pensela_1.2.5_amd64.deb
Rehefa vita ny fametrahana dia tsy maintsy mitady ny mpandefa ao amin'ny rafitra misy anay atombohy ny programa.
Raha liana isika esory ity programa ity, ao amin'ny terminal (Ctrl + Alt + T) dia mila manoratra ny baiko fotsiny ianao:
sudo apt remove pensela
Ny fahafahana iray hafa hampiasa ity programa ity amin'ny rafitra Ubuntu, dia ny misintona avy amin'ny pejy famoahana tetikasa ny .AppImage rakitra. Ho fanampin'izay, hanana fahafahana hampiasa wget ihany koa izahay hisintona ny fonosana farany navoaka androany:
Rehefa vita ny fampidinana, dia ilaina ny manome ny fahazoan-dàlana ilaina amin'ny rakitra mba hahafahana manatanteraka azy manoratra:
sudo chmod +x Pensela-1.2.5.AppImage
Aorian'ny fanatanterahana io baiko io dia hanana fahafahana hanao izany isika manomboka ny programa amin'ny fipihana indroa eo amin'ny rakitra na amin'ny fanoratana amin'ny terminal mitovy:
Amin'ny maha-tetikasa tanora azy, tsy misy olana sasany. Ny lehibe indrindra dia ny tsy fahafahana maka pikantsary amin'ny faritra iray manokana ary manafina ny bara fandaharana rehefa maka pikantsary. Ny mpamorona ny tetikasa dia mamporisika ny mpampiasa hizara izay olana sedrainy, ary koa izay hevitra momba ny endri-javatra vaovao avy ao anatin'ny tahiry ao amin'ny GitHub an'ny tetikasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Pensela, fitaovana ahafahana maka pikantsary sy fanamarihana
Tellico, alamino ny horonan-tsary, mozika, boky ary fanangonana maro hafa
Tonga ny Plasma 5.23.5 ho kinova farany amin'ity andiany ity miaraka amin'ny fanatsarana ao amin'ny Wayland sy Kickoff, ankoatra ny hafa.